တရုတ်အာကာသစခန်း ပင်မခန်း “Tianhe”၏ ပုံစံငယ်အား ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ပြသ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှန်ဟိုင်းနက္ခတ္တဗေဒပြတိုက်တွင် ပြသထားသော တရုတ်အာကာသစခန်း ပင်မခန်း Tianhe၏ပုံစံငယ်အား ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ရှန်ဟိုင်းနက္ခတ္တဗေဒပြတိုက်တွင် တရုတ်အာကာသစခန်းပင်မခန်း Tianhe၏ပုံစံငယ်အား ပြသထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှန်ဟိုင်းနက္ခတ္တဗေဒပြတိုက်တွင် ပြသထားသော တရုတ်အာကာသစခန်း ပင်မခန်း Tianhe၏ပုံစံငယ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအား ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှန်ဟိုင်းနက္ခတ္တဗေဒပြတိုက်တွင် ပြသထားသော တရုတ်အာကာသစခန်း ပင်မခန်း Tianhe၏ပုံစံငယ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအား ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါပြတိုက်သည် ကမ္ဘာ့ကြီးဆုံး နက္ခတ်တာရာပြတိုက်ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အကျယ်အဝန်း(၅၈,၆၀၀) စတုရန်းမီတာခန့် ရှိသည့် ယင်းပြတိုက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ (ရှန်ဟိုင်း)လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး ရှေ့ပြေးဇုန် လျင်းကန်အထူးဒေသတွင် တည်ရှိပြီး ရှန်ဟိုင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပြတိုက်၏ ဌာနခွဲလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ （Xinhua）
#China, #SpaceStation, #shanghai, #tianhe, #myanmar, #xinhua, #xinhuamyanmar, #တရုတ်, #အာကာသစခန်း, #ရှန်ဟိုင်း, #ထျန်းဟော်, #ဆင်ဟွာ
Model of China’s space station core module Tianhe on display in Shanghai
SHANGHAI, July 20 (Xinhua) — A model of China’s space station core module Tianhe is currently on display in Shanghai Astronomy Museum in east China’s Shanghai. The museum, which is the world’s largest planetarium in terms of building scale, opened on July 17, 2021.
1. Photo taken on July 17, 2021 shows the model of China’s space station core module Tianhe displayed in Shanghai Astronomy Museum in east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)
2. 2. A woman visits the model of China’s space station core module Tianhe displayed in Shanghai Astronomy Museum in east China’s Shanghai, July 17, 2021. (Xinhua/Fang Zhe)
3. 3. People visit the model of China’s space station core module Tianhe displayed in Shanghai Astronomy Museum in east China’s Shanghai, July 17, 2021. (Xinhua/Fang Zhe)
4. 4. Photo taken on July 17, 2021 shows the model of China’s space station core module Tianhe displayed in Shanghai Astronomy Museum in east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)■